Kukhona into engenzeki ngendlela engenakugwenywa ngokunciphisa amakhulu eminyaka yomlando emakhasini ambalwa. Phakathi kokunye, ukuvezwa komlando kuyashabalala ngabantu ababamba iqhaza ekudabukeni kweTheku. Okunye, emphakathini onamasiko amaningi njengeTheku, imishungo eminingi ebambe iqhaza elibalulekile izowela eceleni kwendlela. Kepha mhlawumbe umongo omncane womlando uzobonakala ulusizo ezivakashini zedolobha lethu elihle abathanda ukulazi, ngandlela thile, ukuthi sifike kanjani lapho sikhona manje. … Read more
Ilokishi iMpumalanga: ilanga liphuma entshonalanga
Abantu base lokishini iMpumalanga emngceleni osentshonalanga yeTheku banokuningi okufanele bakujabulele. Ngempumelelo babeke emuva udlame olunzima lwezepolitiki ababhekana nalo ngonyaka wango-1980 kanye nasekuqaleni kwngo-1990 olwathatha izimpilo zabaningi ababathandayo kanye nomakhelwane. Impela, ubugebengu, ukwentuleka kwemisebenzi, izingxabano zamatekisi nobumphofu kuseyizinselelo ezinkulu. Kepha babhekana nakhoo ngomfutho ofanayo nokuzethemba babeka emuva izigigaba zakudala. Usomabhizinisi wendawo kanye nesakhamuzi uMzamo Xaba uchaza … Read more